အဝေးသင်ကျောင်းသားတွေအတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်မယ့်ပွဲ - Mandalay Directory
အဝေးသင်ကျောင်းသားတွေအတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်မယ့်ပွဲ
Wednesday, 04 March 2020 11:17
မန္တလေးမြို့မှ အဝေးသင်ကျောင်းသား/သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး နိုင်ငံတကာပညာသင် အခွင့်အလမ်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို အခမဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ့် ပွဲကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
- ပြည်တွင်းမှာ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ပညာရေး(Distance Education) ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ် တက်ရောက်နေသူတွေ
- အဝေးသင်ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ကိုယ့်ပညာရေးအတွက် နောက်တစ်ဆင့် မြှင့်တင်ဖို့စဉ်းစားနေသူတွေ
- နိုင်ငံခြားမှာ (၁)နှစ်လောက် ပညာသင်ကြားပြီးမှ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Career ကို တိတိကျကျရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Read More>>>ဖှငျ့ပှဲအထိမျးအမှတျ အထူးစြေးရောငျးပှဲတျောကငျြးပသှားမယျ့ 78 Central Point Shopping Mall
- အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လိုဘွဲ့တွေတက်လို့ရမလဲ
- အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ် ဖြေဆိုထားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေ လျှောက်ထားလို့ရမယ့် (၃ဝ%)မှ (၁ဝဝ%) နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆုများအကြောင်း
- အဝေးသင်တက်နေရင်း HND,ABE,NCC လက်မှတ်ရှိထားမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာ ဘာသာရပ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်လား.
- ဘွဲ့ရဖို့ အချိန်ဘယ်လောက် ထပ်ပေးရမလဲ
- အဝေးသင်(၃)နှစ်ဘွဲ့ရထားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေ Master Degree(ဘွဲ့လွန်) ဆက်တက်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုမလဲ
- MBA/M.Sc Program တွေအတွက်ပေးတဲ့ ပညာသင်ဆုတွေကို ဘယ်လိုလျှောက်ထားရယူနိုင်မလဲ
- ဘယ်နိုင်ငံက ကျောင်းအပြီးဆက်လက်နေထိုင် အလုပ်လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိလဲ
- ယူကေ၊ ယူအက်စ်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွေမှာ ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ တက်ခွင့်ရဖို့ IELTS/ TOEFL/ ACT/ SATဘာကို ဦးစားပေးဖြေရမလဲ စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
>>>မန္တလေးမြို့ရှိ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေရဲ့ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ(275)
ဒါကြောင့် မန္တလေးမြို့မှ နိုင်ငံတကာပညာရေး စိတ်ဝင်စားသူလူငယ်တွေအတွက်တော့ လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ပွဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲလေကို လာမယ့် မတ်လ (၁၄)ရက်နေ့၊ မနက် (၁ဝ:ဝဝ)နာရီ မှ (၁၁:ဝဝ) နာရီ CROWN Education Mandalay ( အမှတ် စီ-၅၊ ၆၅လမ်း၊ ၃၁လမ်းနှင့် ၃၂လမ်းကြား၊ ရတနာမန္တလေး အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ) မှာ အခမဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပါဝင်စားလို့ တက်ရောက်ချင်သူတွေအနေနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် 09 975 700 800, 09 975 800 800 နဲ့ Online Registration : http://bit.ly/crownmdy14 တို့ကို ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
မန်တလေးမွို့မှ အဝေးသငျကြောငျးသား/သူတှအေတှကျ ရညျရှယျပွီး နိုငျငံတကာပညာသငျ အခှငျ့အလမျးမြားနဲ့ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာမြားကို အခမဲ့ဆှေးနှေးသှားမယျ့ ပှဲကွီးနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
- ပွညျတှငျးမှာ အဝေးသငျတက်ကသိုလျပညာရေး(Distance Education) ပထမနှဈ၊ ဒုတိယနှဈ တကျရောကျနသေူတှေ
- အဝေးသငျဘှဲ့လကျမှတျကိုငျဆောငျထားပွီး ကိုယျ့ပညာရေးအတှကျ နောကျတဈဆငျ့ မွှငျ့တငျဖို့စဉျးစားနသေူတှေ
- နိုငျငံခွားမှာ (၁)နှဈလောကျ ပညာသငျကွားပွီးမှ ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့ Career ကို တိတိကကြရြှေးခယျြလုပျကိုငျဖို့ စဉျးစားထားတဲ့ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူတှအေတှကျ ဆှေးနှေးတိုငျပငျပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
- အဝေးသငျတက်ကသိုလျဘှဲ့လကျမှတျနဲ့ နိုငျငံတကာမှာ ဘယျလိုဘှဲ့တှတေကျလို့ရမလဲ
- အဝေးသငျတက်ကသိုလျ ပထမနှဈ၊ဒုတိယနှဈ ဖွဆေိုထားတဲ့ ကြောငျးသား၊ကြောငျးသူတှေ လြှောကျထားလို့ရမယျ့ (၃ဝ%)မှ (၁ဝဝ%) နိုငျငံတကာပညာသငျဆုမြားအကွောငျး
- အဝေးသငျတကျနရေငျး HND,ABE,NCC လကျမှတျရှိထားမယျဆိုရငျ နိုငျငံတကာတက်ကသိုလျတှမှော ဘာသာရပျကငျးလှတျခှငျ့ရနိုငျလား.
- ဘှဲ့ရဖို့ အခြိနျဘယျလောကျ ထပျပေးရမလဲ
- အဝေးသငျ(၃)နှဈဘှဲ့ရထားတဲ့ ကြောငျးသား၊ကြောငျးသူတှေ Master Degree(ဘှဲ့လှနျ) ဆကျတကျမယျဆိုရငျ ဘာတှလေိုမလဲ
- MBA/M.Sc Program တှအေတှကျပေးတဲ့ ပညာသငျဆုတှကေို ဘယျလိုလြှောကျထားရယူနိုငျမလဲ
- ဘယျနိုငျငံက ကြောငျးအပွီးဆကျလကျနထေိုငျ အလုပျလုပျနိုငျခှငျ့ရှိလဲ
- ယူကေ၊ ယူအကျဈ၊ ကနဒေါ၊ သွစတွေးလနြိုငျငံတှမှော ကုနျကစြရိတျအနညျးဆုံးနဲ့ တကျခှငျ့ရဖို့ IELTS/ TOEFL/ ACT/ SATဘာကို ဦးစားပေးဖွရေမလဲ စတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို အသေးစိတျရှငျးလငျး ပွောကွားသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မန်တလေးမွို့မှ နိုငျငံတကာပညာရေး စိတျဝငျစားသူလူငယျတှအေတှကျတော့ လုံးဝလကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ပှဲလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲလကေို လာမယျ့ မတျလ (၁၄)ရကျနေ့၊ မနကျ (၁ဝ:ဝဝ)နာရီ မှ (၁၁:ဝဝ) နာရီ CROWN Education Mandalay ( အမှတျ စီ-၅၊ ၆၅လမျး၊ ၃၁လမျးနှငျ့ ၃၂လမျးကွား၊ ရတနာမန်တလေး အဆငျ့မွငျ့အိမျရာ၊ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ ) မှာ အခမဲ့ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
စိတျပါဝငျစားလို့ တကျရောကျခငျြသူတှအေနနေဲ့ ဖုနျးနံပါတျ 09 975 700 800, 09 975 800 800 နဲ့ Online Registration : http://bit.ly/crownmdy14 တို့ကို ကွိုတငျစာရငျးပေးသှငျးနိုငျပါတယျ။